ओमिक्रोनको भेरियन्ट : डराउनुनपर्ने विज्ञको भनाइ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना आग्रह « Image Khabar
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार १६:१८
काठमाडौं । विश्वलाई खतराको घण्टी बनेको ओमिक्रोन भेरियन्ट नेपालसहित ५७ देशमा पुष्टि भइसकेको छ । उच्च सतर्कताबीच एक नेपाली र एक विदेशीमा ओमिक्रोन देखिएको हो ।
एकबाट अर्को व्यक्तिमा निकै छिटो फैलने गरेको यस भेरियन्टले पुन संक्रमण गर्ने क्षमता राख्छ । यसअघि देखिएको डेल्टा भेरियन्टभन्दा ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । तर, संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे भने उसले प्रष्ट पारेको छैन ।
ओमिक्रोनको असरबारे अनुसन्धान रिपोर्ट आउने क्रममा छ । तर, पूर्ण खोप लगाएका र एक पटक संक्रमण भइसकेका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएका कारण समस्या बढ्न सक्ने डब्लुएचओको तर्क छ । भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा अत्यधिक म्युटेसनका कारण नै छिटो फैलन सक्ने क्षमता राखेको संक्रामक रोग विज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट दुई साताअघि देखापरेको ओमिक्रोन भेरियन्टको क्षति न्यून देखिएको छ । टाउको दुख्ने, थकाइ लाग्ने, शरीरको जोर्नी दुख्ने जस्ता डेल्टा भेरियन्टमा भन्दा हल्का किसिमको लक्षण देखिएको डब्लुएचओ बताउँछ । तर, खोप लगाएका र नलगाएका व्यक्तिहरूमा लक्षण समेत फरक–फरक देखापर्छ ।
ओमिक्रोनको सर्वाधिक संक्रमण रहेको दक्षिण अफ्रिकामा स्थिति सामान्य रहेको अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ओमिक्रोनका कारण मानवीय क्षति भएको छैन । म्युटेसन सधै खराब नै हुन्छ भन्ने छैन । तर, कडा म्युटेसन भएर हामीले लगाइरहेको खोपले काम गर्दैन कि भनेर पूर्वतयारीमा भने बस्नुपर्ने हुन्छ ।
ओमिक्रोनले डेल्टा भेरियन्टमा जस्तो अक्सिजनको लेभल घटाउने समस्या नदेखिएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको डा. पुन बताउनुहुन्छ । भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा धेरै म्युटेसनका भएका कारण हाल लगाइरहेको खोपले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने जनाइएको छ ।
म्युटेसन भएर फैलन थालेको नयाँ भेरियन्ट प्रति सजग भई त्यसको फैलावट कम गराउन सबै तहमा सचेतता जरुरी छ ।
एकैदिन थपिए १२ हजार ८ संक्रमित, ८ जनाको मृत्यु